Fiaraha-miory amin'ny ankizy | Bezzia
Fiaraha-miory amin'ny ankizy
Maria Jose Roldan | 20/08/2021 22:12 | Ampianaro ny ankizy
Ny fiaraha-miory dia iray amin'ireo soatoavina lehibe indrindra amin'ny zanak'olombelona. Fahaiza-manao izay efa nisy hatry ny fony mbola kely ary mitaky fivoarana azo atao mba ahazoana azy sy hampiasana azy tanteraka.
Amin'ity lahatsoratra manaraka ity dia holazainay aminao hoe amin'ny firy taona no hiseho ny fiaraha-miory ny fivoarany mandritra ny taona maro.
1 Fiaraha-miory amin'ny ankizy
2 Ahoana ny fivoaran'ny fiaraha-miory amin'ny ankizy
Ny fangorahana dia zavatra voajanahary amin'ny olombelona, ​​na dia mitaky fivoarana iray aza izany vao afaka mihetsika. Tafiditra amin'izany ny fahafahanao mametraka ny tenanao amin'ny kiraron'ny olon-kafa ary mahatsapa ny fihetsem-pony rehetra.
Ny ray aman-dreny dia tokony hanampy an'io fiaraha-miory io mba hamboly ny zanany ary hanatsara ny fifandraisan'ny ankizy amin'ny fomba toy izany. Ny ray aman-dreny dia tokony ho ohatra ho an'ny zanany amin'ny fotoana rehetra mitory amin'ny fangorahana isaky ny afaka manao izany ianao.
Inoana fa ny ankizy dia afaka manomboka miombom-pihetseham-po amin'ny taona telo na efatra, izay rehefa fantany tsara fa olona mahaleo tena izy amin'ny fanajana ankizy sy olona hafa.
Ahoana ny fivoaran'ny fiaraha-miory amin'ny ankizy
Ny fampandrosoana ny fiaraha-miory amin'ny ankizy dia manana dingana efatra tena mazava sy miavaka:
Ny iray fantatra amin'ny hoe fiaraha-miory manerantany dia ilay iray izay nahazo nandritra ny taona voalohany tamin'ny fiainana. Ny zaza dia afaka maka tahaka ny fihetseham-pon'ny hafa ary mahatsapa azy ireo toa azy. Izy io dia karazana fiaraha-miory faran'izay tsotra sy tsy mandroso.
Ny fangorahana Egocentric no mitranga amin'ny roa taona. Mahatsiaro tena ho tsy miankina amin'ny hafa ilay zaza na dia mbola mieritreritra aza izy ireo fa tokony hizara ny fahatsapana amin'ny fomba iraisana sy iraisana.
Ny dingana fahatelo izay ilazana ny fampandrosoana dia fantatra amin'ny hoe fiaraha-miory amin'ny fihetseham-pon'ny hafa. Azonao atao ny milaza fa fiaraha-miory saika azo antoka izy io ary manodidina ny dimy na enin-taona no mitranga. Ilay zaza dia efa mahalala tsara fa ny olona tsirairay dia samy manana ny fihetseham-pony ary hainy ny manavaka ny fihetsem-pony amin'ny an'ny hafa.
Ny dingana na dingana farany dia ilay manome fangorahana farany. Matetika dia mipoitra amin'ny faran'ny dingana amin'ny fahazazana izy ary ny zaza dia efa afaka mametraka ny tenany tanteraka amin'ny kiraron'olon-kafa.
Zava-dehibe tokoa ny fahafahan'ny zaza mamindra fo toy izany amin'ny fahazazany. Io fomba io ihany no ahafahanao mandroso amin'ny maha-olona anao sy mamantatra ireo fahatsapana samihafa izay hahatonga anao ho olona tsara kokoa mandritra ny taona maro. Araka ny efa noresahintsika, ny fiaraha-miory dia iray amin'ireo soatoavina lehibe indrindra amin'ny zanak'olombelona ary miankina amin'ny olona mamolavola karazana soatoavina hafa toy ny fisakaizana, fitiavana na fanajana.
Tadidio fa anjaran'ny ray aman-dreny ny manampy ny zanaka mba hanana fangoraham-po rehefa tonga amin'ny taona iray izy ireo. Hahatonga anao ho olona tsara kokoa izany ary ho afaka hametraka karazana fifandraisana rehetra izy, na fianakaviana izany na namana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » RENY » Ampianaro ny ankizy » Fiaraha-miory amin'ny ankizy
Entana 5 handravahana trano fandroana ho an'ny ankizy avy any Zara Home